Shiinaha Steel Qalabka rakiban Qalabka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Zhongming
Luowen Prop steel la hagaajin karo ayaa lagu dabaqayaa nidaamka taageerada tooska ah ee dhismaha si loo taageero qoryaha alwaaxa iyo qaab dhismeedka.
Qalabka birta telescopic loo isticmaalo for shoring of formwork slab iyo baahiyo kale oo kala duwan oo goobta. Ma yihiin qalabka telescopic steel la cimri dherer weyn. Waxay kuxirantahay qaabka dacaayada, dhammeystirka waa lajiidi karaa ama budo la dahaadhay, rinjiyeeyay. Qawaaniinteeda iyo naqshadeynta naqshadeynta waxay bixisaa hagaajin deg deg ah.
Foornada qaab-dhismeedka oo leh qalab lagu dhejiyo waxay ka kooban tahay in la dhigo cutubyo fara badan halkii mitir laba jibbaaran haddii loo baahdo si loo gaaro xasilooni deggan oo xasilloon, oo awood u leh inay rarto dhumucda xajmiga shaqada loo qeexay.
Steel Prop waxaa lagu dabaqayaa nidaamka taageerada tooska ah ee dhismaha si loo taageero qaab-dhismeedka, sida dhismaha dabaqa.
3. Qaab dhismeedka:
Qalabka loo yaqaan 'Steel Prop' wuxuu inta badan ka kooban yahay saxanka hoose, tuubada banaanka ah, tuubada gudaha, lowska qulqulaya, jiingada sariirta, saxanka sare iyo waxyaabaha ka kooban laalaabka tripod, madaxa jaakada, qaabdhismeedka waa mid fudud oo dabacsan
Qalabka loo yaqaan 'Steel Prop' waa mid fudud oo qaabdhismeedka ah, sidaas darteed way fududahay in la isu geeyo oo la kala furfuro.
Steel Prop waa la hagaajin karaa sababtoo ah tuubada banaanka ah iyo tuubada gudaha ah, tuubada gudaha way sii dheereyneysaa kuna yaraaneysaa tuubada banaanka, ka dibna waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo dhererka loo baahan yahay.
Qalabka birta ayaa dib loo isticmaali karaa, oo mar aan waxtar lahayn, maaddada ayaa sidoo kale la soo celin karaa.
7.Wax ku ool ah iyadoo la adeegsanayo:
Qalabka birta ayaa lagu hagaajin karaa dhererka loo baahan yahay iyadoo loo eegayo dhererka kala duwan ee dhismooyinka.
Fiiro gaar ah: Ku saabsan dhumucda tuubada, waxaan soo saarnaa dhowr nooc oo cabbir ah, sida dhumucda dhumucda 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, ama waxaan u soo saari karnaa sidii loo habeeyay.
Qalabka birta telescopic ayaa loo isticmaalay si loogu iibiyo mashaariic dhisme oo aan la tirin karin, macaamiisheenuna wali way doorbidaan sababtoo ah waxtarkooda iyo sahlanaanta isticmaalka. bixinta kalsoonida iyo amniga goobta dhismaha.
Haddii aan sii tixgelinno tayada alaabada ceyriinka ah ee la isticmaalay, hababka wax soo saarka iyo daaweynta ugu dambeysa ee lagu dabaqo badeecadeena, natiijooyinka goobta ayaa ah
damaanad qaaday Qalabkaani waxaa loogu talagalay oo la soo saaray iyada oo la raacayo tilmaamaha UNE 180201. Dhammaan xogta lagu muujiyay dukumintigan waxaa taageeraya
tijaabo adag lagu qaaday shaybaarkayaga baaritaanka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shaqada saxda ah, isticmaalka iyo maaraynta qalabka birta telescopic, fadlan la xiriir, waxaan ku farxi doonnaa inaan ka soo qaybgalno weydiimahaaga.
Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Iskuxidhka Birta Cuplock, Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Kwikstage Qalabka Isboortiga,